sai sai khan hling | Weenyinthit Bookshelf
စာအုပ်မတင်တာကြာလို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေကို ဖားသောအားဖြင့် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ရဲ့ ၀တ္တုလေးကို ရှယ်လိုက်ပါတယ်။
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် – ကံကိုဆွဲ၍မှုန်းသီခြယ် မင်ရည်ကျဲ၏ မကျဲ၏ (pdf)
Credit to – လင်းထက်ဖိုရမ်..
12 Responses to “စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ရဲ့စာ”
ko thu says:	April 10, 2011 at 6:22 am	စာအုပ်တွေ ကိုဘယ်လို့ down ယူရမှာလဲ …
ပြီးတော့ တစ်ချို့ စာအုပ်တွေ က မြန်မာလို မပေါ်တော့.. ဘယ်လိုမျိုး font ကို install လုပ်ပြီး ဖတ် ရမှာလဲ ဗျ….
Reply	သက်ထားနွယ် says:	August 26, 2011 at 11:09 pm	စိုင်း. . . စာအုပ်အသစ်လေးတွေထပ်ရေးပါအုံး
အရာရာမှာ အောင်မြင်ပါစေနော် . . .
Reply	သက်ထားနွယ် says:	August 26, 2011 at 11:12 pm	စိုင်း . . . စာအုပ်အသစ်ထပ်ထွက်ပါအုံး
အရာရာ အောင်မြင်ပါစေ . . .
Reply	သက်ထားနွယ် says:	August 26, 2011 at 11:16 pm	စိုင်း . . . စာအုပ်အသစ်ထပ်ထွက်ပါအုံး
Reply	May Lin Kha says:	October 2, 2011 at 2:45 am	လင်းက စိုင်းစိုင်းကို အမြဲအားပေးနေတဲ့ စိုင်းစိုင်းရဲ့ ပရိသတ်ပါ…စိုင်းစိုင်းရဲ့သီချင်းတွေကို အရမ်းကြိုက်ပါတယ်…ပြီးတော့စိုင်းစိုင်းရဲ့စာတွေကိုရောပေါ့…စိုင်းစိုငးဒီထက်မက အောင်မြင်ပါစေ…
Reply	မယ်မဒီ says:	October 30, 2011 at 4:33 am	စိုင်းစိုင်း ကို အရမ်းကြိုက်တယ်၊ L ကောင်းမြတ်နဲ့ စိုင်းစိုင်း တို့ ရဲ့ ပတ်သတ်မှုက ဘယ်လိုလဲ
၀တ်မှုန်ရွှေရည် နဲ့ စိုင်းစိုင်း ကို သဘောမတူဘူး
Reply	ပါပါရာဇီ says:	August 30, 2012 at 2:54 am	ဖင်လိုးဖင်ခံတွေပါစိုင်းစိုင်းနဲ့ ကောင်းမြက်က ကျနော်ကိုယ်တိုင်သိချင်းပါစိုင်းစိုင်းအခြောက်ကြီးပါ..၀တ်မုံရွေရည်နဲ့ ကြိုက်တာလဲဟုတ်ပါတယ်..အခုပြတ်သွားပါပြီ..သူအချောက်ကြီးမှန်သိသွားလို့ ပါသူနဲ့ နေတိုးတို့ အပြန်အလှန်လုပ်ကြတာလဲအားလုံးသိပါတယ်..ပြင်ဦးလွင်ဟိုတယ်မှာပါ..စိုင်း2သူငယ်ချင်းကအဲ့ ဒီဟာကိုရိုတ်ပီးပိုက်ဆံတောင်းတာသူနဲ့ နေတိုးတယောက်တ၀က်စိုက်ပြီးဝယ်ကြပါတယ်..အဲ့ တာလဲသူတိုနဲ့ နီးစပ်တဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းသိအကုန်ပွကုန်ပါတယ်..နေတိုးကလဲအတူတူပါပဲ..
Reply	နန်းချယ်ရီ says:	August 19, 2012 at 7:11 am	စိုင်းစိုင်းကအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။ဘာမေဂျာနဲ့ကျောင်းပြီးတာလဲသိချင်ပါတယ်။စိုင်းစိုင်းက၀တ်မှုံရွှေရည်ကိုတကယ်ကြိူက်တာလားဟင်။အမှားပါရင်ခွင့်လွှတ်နော်။
Reply	ချယ် ရီလိုခေါ်ပါတယ် says:	September 9, 2012 at 1:56 am	စိုင်းစိုင်းရဲ့ သီချင်းတွေကို အ ရမ်း သဘောကျတယ် ဖြစ်န်ိုင်ရင် မေးထဲ မှာစကားတွေအများ ကြီးပြောချင်တယ် ယူ့ သဘောတော့ ဘယ်လို လဲ မသိဘူး အခုတော့ ရေးတက်တာ ဒါပါပဲ့ ပြောချင် တဲ့ အကြောင်းတွေ ဘယ်က စပြောရမလဲ ဟိဟိ
Reply	ချမ်းကိုကို says:	September 11, 2012 at 12:19 pm	အကိုစိုင်းစိုင်း ညီနာမည်ကချမ်းကိုကိုပါ အကိုကိုလဲအရမ်းလေးစားတယ် အကို့ သီချင်းတိုင်းကိုလဲအားပေးပါတယ် သီချင်းတိုင်းမှာတော့ခံစားချက်ပါတယ်လေ ဒါပေမယ့်ညီကဖုန်လိုက်ဖုန်လိုက်ကိုပိုကြိုက်တယ် ဘာလို့ လဲဆိုတော့သီခ်ျးကမြူးလို့ ပါ အကိသီချင်းသစ်တွေဖန်တီးနိုင်ပါစေလို့ ညီစုတောင်းပေးပါတယ်
Reply	ရဲလှိုင် says:	September 12, 2012 at 10:19 am	မိုးသချင်းကိုကြိုတ်ပါတယ် အကိုချောလဲချောတော့ ကောင်မလေးတွေ ၀ိုင်းနေတာပဲနော်
Reply	nainglin11111 says:	October 20, 2012 at 8:50 am	very good